China Convenience ụlọ ahịa ahịa n'ihu signboard maka Yonghui emepụta na suppliers |Zhengcheng
Ihe mkpuchi acrylic saturation dị elu nwere agba na-egbuke egbuke, akara ngosi oghere, na ọdịdị mara mma nke na-ahapụ ihe oyiyi dị mma maka ndị ahịa.Igwe ọkụ dị elu nke tube na-edu ndú na-adọrọ mmasị karị n'abalị ma na-adọta ndị ahịa nwere ike.
Aha ngwaahịa: akara igbe ọkụ n'ihu ụlọ ahịa
1. Ihe nrịbama ụlọ ahịa Yonghui na-eji imewe oghere na akụkụ akara ngosi.Anyị na-etinye acrylic agba osisi na a ọkachamara osise igwe maka osise, na ikpeazụ kpụrụ logo mmiri chestnut bụ iche na mara mma.
2.The acrylic agba efere na acrylic agba ibe na-aka glued na ìhè igbe.Enweghị ọdịiche dị n'etiti eriri agba acrylic na ahụ igbe, ya mere ọ na-enweghị mmiri na uzuzu uzuzu, ma dị mfe ihicha.Ojiji nke afọ 3-5 agaghị emetụta mmetụta ojiji na nchapụta nke akara ụlọ ahịa ahụ.
3.Mgbe a na-etinye akara ngosi ọkụ n'akụkụ abụọ nke ụlọ ahịa ahụ, a pụrụ iji igbe ọkụ nkuku mee ihe na nkwụsị nke akara ngosi abụọ ahụ, nke bụ ihe okike na mara mma.
Sichuan Zhengcheng Starlight Energy-saving Technology Co., Ltd dị na Chengdu, China, nwere ụlọ ọrụ na Beijing na Wuhan, China.Ọ bụ onye nrụpụta ọkachamara na-emepụta igbe ọkụ na-azọpụta ike maka ụlọ ahịa dị mma.Ebe ọ bụ na e guzobere 6 afọ gara aga, ụlọ ọrụ ahụ enwetala akwụkwọ ikike anọ nke mba na ụlọ ahịa ụlọ ahịa dị mma n'ichepụta igbe ọkụ.Ụlọ ọrụ anyị nwere ụlọ ọrụ ọkachamara na mpaghara 4,200 square mita na igbe ọkụ anọ na-emepụta ahịrị mmepụta.Zhengcheng na-eje ozi ugbu a karịa ụdị 100 na China ma na-emepụta ihe dị ka mita 30,000 nke igbe ọkụ na-azọpụta ike kwa afọ.
Nke gara aga: Acrylic mgbasa ozi na-azọpụta ike igbe akara
Osote: Akara mgbasa ozi acrylic na-egbochi mmiri n'èzí
Ihe nrịbama ụlọ ahịa, Vacuum Forming Light Igbe nbanye, Akara ngosi, Ihe nrịbama ụlọ ahịa ọgwụ, Igbe nrịbama nke ọnya ọkụ, Igbe nrịbama nke mpụga,